एनएमएमा उम्मेदवारको अन्तिम टुंगो लगाउन दुवै समूहमा रस्साकसी जारी – Health Post Nepal
एनएमएमा उम्मेदवारको अन्तिम टुंगो लगाउन दुवै समूहमा रस्साकसी जारी
२०७६ मंसिर २७ गते १६:३६
नेपालको पहिलो पेसागत संगठन नेपाल चिकित्सक संघको २८औँ कार्यसमितिका लागि यतिवेला मनोनयन दर्ताको अवधि चलिरहेको छ । आगामी माघमा हुने केन्द्रीय कार्यकारिणी तथा विभिन्न शाखाहरूको निर्वाचनका लागि शुक्रबारदेखि शनिबार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि मनोनयन दर्ताको समय तोकिएको छ । यतिवेला चिकित्सक नेताहरू प्रजातान्त्रिक समूह तथा प्रगतिशील समूहमा विभक्त भई आफ्नो प्यानललाई सशक्त रूपमा मतदातामाझ प्रस्तुत गर्न योग्य उम्मेदवार छनोटमा व्यस्त छन् । यद्यपि, दुवै प्यानलबाट अध्यक्षलगायत प्रमुख पदमा उतारिने अनुहार यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेका छन् ।
मनोनयनको रस्साकसी चलिरहँदा आकांक्षीहरूलाई चित्त बुझाउँदै आ–आफ्नो समूहलाई एकताबद्ध देखाउन दुवै पक्ष व्यस्त छन् । केही चिकित्सकले कुनै प्यानलमा आबद्ध नभई स्वतन्त्र रूपमा मनोनयन दर्ता गराउन पनि निर्वाचन आयोगबाट फर्म लिएका छन् । मुलुकको पहिलो पेसागत संगठनको यसअघिका २७ वटा कार्यसमितिमा एउटा पक्षले मात्र वर्चस्व राख्दै आएको छ । २० फागुन २००७ मा स्थापित संघका यसअघिका सबै कार्यसमितिको नेतृत्वमा प्रजातान्त्रिक समूह नै विजयी हुँदै आएको छ । त्यसैले आफ्नो सात दशक लामो विरासतलाई कायम राख्नुपर्ने चुनौती प्रजातान्त्रिक समूहसामु छ ।
अर्कोतर्फ दुईतिहाइ जनमतका साथ दुई वर्षदेखि सत्तासीन नेकपाका लागि आफूनिकट चिकित्सकलाई संघको नेतृत्वमा ऐतिहासिक रूपमा प्रवेश गराउने चुनौती छ । यसका लागि सत्तापक्ष र त्यसनिकट चिकित्सकले जुनसुकै हतकण्डा अपनाउने संकेत देखाइसकेका छन् । यस्तोमा विगतमा एकपक्षीय रूपमा हेर्ने गरिएको संघको निर्वाचन यसपटक भने केही गरम हुने अनुमान छ । यद्यपि, बौद्धिक तथा पेसानिष्ठ रूपमा पहिचान बनाएका चिकित्सकमाझ सत्ताको प्रभाव खास नपर्ने हुँदा यसपटक पनि मजबुत जरासहित गौरवपूर्ण इतिहास र सुदृढ संगठन भएको प्रजातान्त्रिक समूहकै पल्ला भारी हुने आमअनुमान छ ।
क–कसले दर्ता गर्दै छन् मनोनयन ?
प्रजातान्त्रिक समूहले संघको २८औँ कार्यसमितिको अध्यक्षका लागि वर्तमान महासचिव डा. लोचन कार्कीलाई अघि सारेको छ । संघका पूर्वअध्यक्षहरूको सर्वसम्मत निर्णबाट उनी कात्तिकको अन्तिम साता नै आगामी अध्यक्षको उम्मेदवारका रूपमा अघि सारिएका थिए । लामो समयदेखि संघले दिएको जिम्मेवारी निष्ठापूर्वक सम्पन्न गर्दै आएका डा. कार्की चिकित्सकमाझ निकै लोकप्रिय मानिन्छन् । नम्र स्वभाव, सहयोगी भावना र संघआबद्ध सदस्यको समस्यामा सधैँ सँगै हुन खोज्ने प्रयत्नका कारण उनी चिकित्सकका असल मित्र मानिँदै आएका छन् । उनको यही छवि, जिम्मेवारीप्रतिको निष्ठा र संघमा पुर्याएको योगदानको मूल्यांकन गरेरै भावी नेतृत्वका लागि उनलाई अघि सारिएको संघका पूर्वअध्यक्ष हरूले बताउँदै आएका छन् । डा. कार्कीले पनि आफूमाथि संघका योद्धाहरूले गरेको विश्वासमा खरो उत्रिने बताउँदै आएका छन् ।
डा. कार्कीले संघको साधारण सदस्यदेखि केन्द्रीय महासचिवको जिम्मेवारीमा रही काम गरिसकेका छन् । उनले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको सदस्य तथा विभिन्न पदाधिकारीको जिम्मेवारीमा रही लामो अनुभव बटुलेका छन् ।
अध्यक्षमा डा. कार्कीको प्रतिस्पर्धा डा. पुष्पमणि खरालसित हुँदै छ । सत्तारूढ नेकपानिकट प्रगतिशील समूहले डा. खराललाई आगामी अध्यक्षमा अघि सार्ने घोषणा यसअघि नै गरिसकेको छ । सो समूहले अन्य पदाधिकारी तथा सदस्यमा उठाउने उम्मेदवारको नाम भने आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छैन । सो समूहले शुक्रबार निर्वाचन समितिबाट १३ वटा मनोनयनपत्र लगे पनि मनोनयन दर्ता भने शनिबार मात्र गर्ने बुझिएको छ ।
डा. कार्की नेतृत्वको प्रजातान्त्रिक समूहले भने यसअघि नै अन्य पदाधिकारी तथा सदस्य पदमा मैदानमा उतारिने नाम मोटामोटी रूपमा टुंगो लगाइसकेको अवस्था छ । यद्यपि, केही उम्मेदवारको नाममा भने अझै छलफल भइरहेको स्रोतले बताएको छ । केही पदमा आकांक्षी धेरै देखिएकाले र केही हेरफेर गरेर भए पनि आफ्नो प्यानललाई एकजुट रूपमा प्रस्तुत गर्ने अन्तिम गृहकार्य भइरहेको बताइएको छ । सो समूहले पनि शनिबार नै मनोनयन दर्ता गराउने भएको छ ।
प्रजातान्त्रिक समूहले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा डा. शिवप्रसाद श्रेष्ठलाई मैदानमा उतार्ने भएको छ । त्यस्तै, उपाध्यक्षमा डा. अनिलविक्रम कार्की प्रतिस्पर्धामा उतारिँदै छन् । संघमा अध्यक्षपछिको महत्त्वपूर्ण पद मानिने महासचिवमा प्रजातान्त्रिक समूहबाट डा. बद्री रिजालले उम्मेदवारी दिँदै छन् । अध्यक्षदेखि महासचिवसम्मका पदमा खास विवाद नरहेका कारण उल्लेखित व्यक्तिहरूको मनोनयन लगभग पक्का छ । त्यस्तै, पदाधिकारीतर्फको अर्को पद सहसचिवमा डा. नीरज सिंहलाई अघि सार्ने तयारी प्रजातान्त्रिक समूहको छ । यसअघि उनको नाम सदस्यका लागि चर्चामा थियो ।
तर, कोषाध्यक्ष पदका लागि भने प्रजातान्त्रिक समूहमा अहिले पनि रस्साकस्सी जारी रहेको बताइएको छ । कोषध्यक्षमा डा. प्रकाश बुढाथोकी र डा. विश्वराज दवाडीमध्ये एकले बाजी मार्ने स्रोतको भनाइ छ । यसअघि कोषाध्यक्षमा डा. शिवजी पौडेलको नाम लगभग पक्का मानिएको थियो । डा. दवाडीको नाम सहकोषाध्यक्षमा चर्चामा थियो । त्यस्तै, कोषाध्यक्षको टुंगो नलागेसम्म सहकोषाध्यक्षको पनि निर्क्योल नहुने स्रोतको भनाइ छ । यतिवेला कोषाध्यक्ष र सहकोषाध्यक्षको नाम फाइनल गर्न छलफल चलिरहेको छलफलमा सहभागी एक चिकित्सक नेताले बताएका छन् ।
प्रजातान्त्रिक समूहबाट सदस्यहरूमा डा. सञ्जीव तिवारी, डा. नन्दा गुरुङ (भैरहवा), डा. रितेश थापा (काठमाडौं), डा. विपेश आचार्य (धरान), डा. प्रमोद जोसी (धनगढी), डा. मनोरदिन सैयद (काठमाडौं), डा. विक्रान्त ढकाल (पोखरा) लगायतको नाम चर्चामा छ । असन्तुष्टहरूलाई मिलाउने अन्तिम प्रयास चलिरहँदा उल्लेखित नाममध्ये केही हेरफेर हुन सक्ने स्रोतको भनाइ छ । यद्यपि, केही नाममा भने सर्वसम्मति रहेकाले पनि धेरैजसो यिनै अनुहारलाई मैदानमा उतारिने बताइएको छ ।
शनिबार १ बजेभित्र मनोनयन दर्ता गरिसक्नुपर्ने, सोमबार उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन
निर्वाचन समितिले एनएमएको कार्यकारिणी समितिको २०७६–२०७९ कार्यकालका लागि मागमा हुने २८औँ कार्यसमितिको निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार शुक्रबार १० देखि ४ बजेसम्म र शनिबार १० देखि १ बजेसम्मका लागि मनोनयन दर्ताको समय तोकेको छ । प्रमुख प्रतिस्पर्धी मानिएका दुवै प्यानलले शुक्रबार मनोनयन दर्ता गराएका छैनन् । दुवैले शनिबार मनोनयन दर्ता गराउने बताइएको छ ।
निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन इच्छुक नेपाल चिकित्सक संघको आजीवन सदस्यले आफैँ वा आफू उपस्थित हुन नसकेको अवस्थामा वारेसनामा दिएर शनिबार १ बजेभित्र मनोनयन दर्ता गरिसक्नुपर्ने प्रमुख निर्वाचन अधिकृत डा. बाबुराम मरासिनीद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ । मनोनयनका लागि स्वयम् उपस्थित हुन नसकेको अवस्थामा संघबाट प्रकाशित मतदाता नामावलीमा नाम उल्लेख भएका चिकित्सकलाई वारेसनामा दिई संघको केन्द्रीय कार्यालयमा उम्मेदवारी दर्ता गराउन सकिने निर्वाचन समितिले जनाएको छ ।
निर्वाचन समितिले ३० मंसिरमा उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्नेछ । यसअघि उम्मेदवारको नाममाथि दाबीविरोध तथा उम्मेदवारी फिर्ताको कार्यक्रम छ । संघको निर्वाचन काठमाडौंबाहिरको हकमा ४ र ५ माघ र काठमाडौंभित्रको हकमा १७ देखि २१ माघमा हुनेछ ।
One thought on “एनएमएमा उम्मेदवारको अन्तिम टुंगो लगाउन दुवै समूहमा रस्साकसी जारी”
साथी हरुमा अनुरोध : जसको नर्सिङ होम छ । जो मेडिकल कलेज का प्रमोटर हुन तीनहरु ले कुनै पनि चिकित्शक को भलो गर्छन भन्ने सम्झानु गलत हो । त्यस कारण जो निजी अस्पताल का सन्चालक होईनन्,तीनहरु लाई काउन्सिल र एन एम ए मा पठाउनु उत्तम हुनेछ ।